श्रमिकको तलबमा त्रिपक्षीय छलफलः आधा अहिले र आधा पछि ? - Jhapa Online
श्रमिकको तलबमा त्रिपक्षीय छलफलः आधा अहिले र आधा पछि ?
झापा, ९ जेठ । बन्दाबन्दीको समयमा चैत महिनाको पूरै तलब र वैशाख महिनाको आधा अहिले र आधा पछि दिनेगरी तलब वितरण गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
उद्योगी र श्रमिकका नेता पनि यस विषयमा सकारात्मक भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय निकाल्न पहल भइरहेको पनि प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । उनले कोभिड १९ ले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न एक्लो सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्र र टे«ड युनियनले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनका अनुसार रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उद्योग प्रतिष्ठानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसमा रोजगारदाताले सकेसम्म पहलकदमी लिने र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयमा राहत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारको नेतृत्वमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तीनै पक्ष सम्मिलित १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट अर्थ, श्रम, उद्योग र कृषि मन्त्रालयका पाँच जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) को नेतृत्वमा पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि र श्रमिकका तर्फबाट संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको नेतृत्वमा पाँच जना गरी १५ जना सम्मिलित कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले नियमित छलफल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म निचोडमा पुगिसकेको छैन ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।